Quebec yeCanada inoburitsa mutero mutsva kune vasina kubayiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Quebec yeCanada inoburitsa mutero mutsva kune vasina kubayiwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutungamiriri wedunhu reCanada reQuebec, François Legault
Nezvipatara zveCCIDID-19 zvichikwira mukati mekukurumidza kupararira kweiyo Omicron mutsauko, Quebec ichada vamwe vashandi vechipatara chiuru nevashandi vanosvika chiuru nemazana mashanu mumavhiki mashoma anotevera, Legault akadaro.
Mutungamiriri wedunhu reCanada reQuebec, Francois Legault, nhasi vavimbisa kudzika chirango chitsva chemari, vachiti avo veQuébécois vanoramba kuwana mushonga wavo wekutanga mumavhiki anouya vachafanira kutanga kubhadhara mari yavo pahurongwa hwekuchengetedza hutano.
"Parizvino, inyaya yerusaruro kune makumi mapfumbamwe muzana evagari vakaita zvimwe zvinhu," Legault akadaro. "Ini ndinofunga tine chikwereti kwavari ichi chiyero."
Zvitsva kubva pakurambidza unjabbed anti-vaxxers kupinda muzvitoro zvedoro nezvitoro zvecannabis, Quebec iri kuburitsa mutero mutsva wehutano kune avo vanoramba kubaiwa jekiseni rekurwisa coronavirus.
Achibvunzwa nezvematambudziko emutemo uye etsika angangosangana nehurumende pamusoro pemutero usati wamboitika, Mutungamiriri akabvuma kuti danho iri "guru."
Legault akati: “Kana ukatarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika kana kuti dzimwe nyika, munhu wose ari kuedza kuwana mhinduro. Mubvunzo wekuenzana nekuti izvozvi, vanhu ava, vanoisa mutoro wakakosha pahutano hwedu network, uye ndinofunga zvakajairwa kuti ruzhinji rwevanhu rwuri kubvunza kuti pave nemhedzisiro. ”
Quebec Prime Minister haana kuzivisa huwandu hwemutero mutsva. Vati dunhu richaenderera mberi nekuwedzera mashandisirwo emapasipoti epurovhinzi, asi akapokana kuti "tinofanirwa kuenda mberi" pane kurambidza vagari vasina kubayiwa munzvimbo dzeveruzhinji.
Chirevo chepasipoti chakawedzerwa kuzvitoro zvinodhaka uye zvecannabis svondo rapfuura mushure mekupihwa mvumo yekupinda munzvimbo dzakaita semaresitorendi, theatre, mabara nemakasino.
NeCOVID-19 muchipatara ichikwira pakati pekupararira nekukurumidza kweiyo Omicron musiyano, Quebec vachada vamwe vashandi vemuzvipatara chiuru nevashandi vekumba inochengeterwa vakwegura chiuru nemazana mashanu mukati memavhiki mashoma anotevera, Legault akadaro.
Quebec yakashuma kufa makumi matanhatu nenomwe eCCIDID-62 neChipiri, zvakanyanya kubva muna Ndira 19, kuburitswa kwekudzivirira kwepurovhinzi kusati kwatanga.
Akex Semiletow anoti:
Ndira 12, 2022 pa14: 15
Zvakanaka kuona wezvematongerwo enyika ane huwandu hwakafanira hwehushingi. Kurongeka kunoshanda nenzira mbiri uye rusununguko rwemunhu runopera kwarunotanga kupindira pazvinhu zvemumwe munhu…